အိမ်မက်စေရာ: မောင်လေးနဲ့ ညီမလေး တွေ အတွက် အချစ်အကြောင်းလေး..
ညီမလေး၊ မောင်လေး တွေ အတွက် ပို့စ်လေး တစ်ပုဒ် ရေးချင်စိတ် က ခုတလော ပေါ် ပေါ်လာတယ်။ တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ အိမ်မက်က eainmatsayar@googlemail.com ဖွင့် ပြီးမှ တခြားသူတွေ နဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်။ အရင် က အကောင့် ရှိပေမယ့် သူငယ်ချင်းနဲ့ မိသားစု ပဲ ပြောဖြစ်တာ ။ အကောင့် အသစ်လေး ဖွင့်ပြီးမှ တခြား မသိသူတွေနဲ့ တော်တော် စကားပြောဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ငယ်တဲ့ ညီမလေး၊ မောင်လေး တွေ ပါတယ်။ ရွယ်တူတွေလဲ ပါပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်မက်က အမ လို့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပဲ ပြောဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ခုတလော မမ ကလေ ..မမ ကလေ လို့ ပြောရင်း လူကြီးစိတ်တွေ တော်တော့ ကို ဝင်လာပါတယ်( ပြောတာပါပဲ)..သူတို့ ရဲ့gtalk မှာ တင်ထားတဲ့ custom message လေးတွေ ဖတ်ပြီး အချစ်အကြောင်းလေးတွေ အသဲကွဲ တာလေးတွေ..စိတ်ညစ်တာလေး တွေ.သိပ်ချစ်တာလေး တွေ သိ လာရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အိမ်မက် ညီမလေး၊ မောင်လေး တွေ အတွက် ပို့စ်လေး တစ်ခုရေးချင်လာတယ်။ အဓိက က ညီမလေး အတွက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ကိုယ်တိုင်က မိန်းကလေး ဆိုတော့လေ ဒါပေမယ့် ယူတက်ရင် ရတာပဲ မဟုတ်လား မောင်လေး တွေ အတွက်လဲ ပါ တာပါပဲ။းp
မောင်လေး တို့ ညီမလေး တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ကြပြီ ဆိုရင် ချက်ချင်း မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါ ယုံလား မသိဘူး။ ငယ်တဲ့ အရွယ်လေး တွေမှာ ရင်ခုန်မှု စိတ်လှုပ်ရှားမှု ..စမ်းသပ်ချင်မှု လေးတွေက စတာဆိုတော့ ရုတ်တရက် ဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိပ်ချစ်တယ် မချစ်ဘူး ဆိုတာ သေချာ မသိကြပါဘူး။ ရည်းစား အပျော်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ချစ်သူအတည်ထားဖို့ ဆိုရင် စချစ်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ချစ်မယ့်သူက ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ယူပြီး မှ အတည်ပြုစေချင်တယ်။ အချိန် ဆိုတာလေး အတွက် မောင်လေး ရော ညီမလေးပါ စိတ်ရှည်စေချင်တယ်။
ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီ ဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားမနာတမ်း လေ့လာ ပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို တစ်ယောက်က သိမှ ချစ်သူ ဘဝ ရှည်ကြာမယ် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ လေ့လာပါ စကားများများ ပြောပါ။ တိုင်ပင်ပါ။ ဒီကနေတဆင့် တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို တစ်ယောက်က ဖောက်ထွင်းသိမြင် လာပါလိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်သိတာတွေ များလာရင်တော့ စိတ်ခုရတာလေး တွေ ရှိလာ လိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် နားလည်မှု လေးတွေ ရှိစေချင်တယ်။ နားလည်မှု ထားရတာ သိပ်ခက်နေလားး) .. သူ့အားနည်းချက်ကို မစဉ်းစားခင် ကိုယ့် အားနည်းချက်ကို အရင် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။
ရန်ဖြစ်ပြီးရင် ပြန်ချစ်ပါနော်။ ရန်ဖြစ်ကြပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ မြင်လာလိမ့်မယ်။ ငါတော့ မှားပြီလို့ မတွေးလိုက်နဲ့နော်... ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းကျင့်လဲ သူမြင်သွားမှာပဲ။ ရန်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားပြီး နောက်တစ်ခါ အဲ့ဒီအကြောင်း ကို ပြန်မစနဲ့။ မောင်လေးက ကိုယ်မှားပါတယ် ချစ်သူရယ် လို့ တောင်းပန်ရင်..ညီမလေးကလဲ တို့ လဲ မှားတာပါပဲ ချစ်သူရယ်လို့..မပျက်မကွက် ပြန်ပြောနော်။ အပြစ်ကို သူ့အပေါ်ပဲ ပုံမချနဲ့။
ကဲ ပြော လက်ထပ်ကြမှာလား။ မြန်မာ လူမျိုးတွေက လက်ထပ်ကြတယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာတဲ့ မောင်လေး တို့ ညီမလေး လဲ လက်ထပ်ရမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ လက်ထပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိရင် အစထဲက ချစ်သူမထားနဲ့။ ထားပြီဟေ့ ဆိုရင် လက်ထပ်ဖို့ စဉ်းစား။
လက်ထပ်ဖို့ ဆိုပေမယ့် အလောသုံးဆယ် လုပ်တာမျိုးတော့ မဖြစ်စေနဲ့ နော်။ သေချာဆုံးဖြတ်ပြီး အစီအစဉ်လေး တွေ ဆွဲ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ပြီး တာမကဘဲ သားသမီး ယူဖို့ နဲ့ နှစ်ဖက် မိဘတွေ အတွက် က အစ အစီအစဉ်လေး တွေ ချကြည့်။
သူ့မိဘ အကြောင်းကို ဂရုတစိုက်ထား။ ဒါမှ သူလဲ ကိုယ့်မိဘ ကို ဂရုစိုက်မှာ။ သူ့မိဘကို ကိုယ်က ဦးစားပေးမှ သူလဲ ကိုယ့်မိဘ ကို ဦးစားပေးမှာ လေ။
ဒီလို ပြောလိုက်လို့ တခြားတွေးမနေနဲ့ ဦး။ တစ်ဖက်လူကို အလိုသိပ်လိုက်တာ ဘာဖြစ်စေလဲ ဆိုရင်၊ ကိုယ့် အချစ်ကို ဖော်ပြပြီး သူ့အချစ်ကို ဖျောက်ပြစ်ရာ ရောက်တယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုယ်တိုင်က သူ့ကို သိပ်နားလည်ပေးလွန်းရင်း အရာရာ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ပဲ ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် အကောင်းမြင်လွန်းရင် သူရဲ့အချစ်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရောင်နုသွားလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု မသုံးပဲ ထားရင် ဖုန်တက်သလို မျိုးပေါ့။ ကိုယ့်အချစ်တွေပဲ သူ့ကိုပေးနေရင် သူ့အချစ်ကို သူကိုယ်တိုင်မေ့သွားလိမ့်မယ်။ သူ့ကို သတိလက်လွတ် ဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကြောင့် အလိုသိပ်မလိုက်နဲ့။
မီးဖိုချောင် နိုင်နင်းမှ မိန်းမကောင်း လို့ ပြောရင်တော့ အဲ့ဒါ မှားတယ် လို့ ပြောချင်တယ်။ ဒါဆို မနိုင်နင်းရဘူးလား ဆိုရင် အဲ့လို မဟုတ်ဘူး ခုခေတ်က အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ မိန်းကလေးတွေ အတွက် အလုပ် က မီးဖိုချောင်တစ်ခုထဲမှာ မှ မဟုတ်တာ။ ကျောင်းနေချိန်မှာ ဘယ်မိဘက မှ သားသမီးကို ချက်တာ ပြုတ်တာ ခိုင်းချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းပြီးတော့လဲ မောင်လေး၊ ညီမလေး တို့ တက်စရာ သင်တန်းတွေ အပြည့်မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါပေါ့ မိန်းကလေး တွေ မီးဖိုချောင် သိပ်မဝင် ဖြစ်တော့ လူတိုင်း မကျွမ်းကျင်နိုင်ဘူး ။ ကျောင်းပြီးသွားတော့လဲ အလုပ်ထဲ ရောက်သွားရော။ ဒီနေရာတစ်ခု ပြောချင်တာ သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် သူချက်တာလေးတွေ အကောင်းမြင်ပြီး စားပေးပါ ဒါမှ သူ ချက်ချင် ပြုတ်ချင်စိတ်ရှိမှာလေ။ ခေတ်လူငယ်တွေ အချိန်မလောက်ဘူး မဟုတ်လား ။ မောင်လေးတို့ မအားသလို ညီမလေးတွေလဲ လုပ်စရာတွေ အများကြီးမို့ ညီမလေးတွေ မီးဖိုချောင်ဝင်မယ်ဆို မောင်လေး တို့ကလဲ ချစ်သူကို ဝိုင်းကူပေါ့ကွယ် နော့။းp
ချစ်သူဖြစ်တာ ကြာလာပြီဆိုရင် ငြီးငွေ့တက်လာကြတယ်။ ပြီးရင် အသစ်ရှာချင်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် လူတွေက လတ်ဆတ်တဲ့ ခံစားချက်ကို နှစ်သက်ကြလို့လေ။ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ မောင်လေး တို့ ညီမလေး တို့ ဆို ပိုပြီး ဆိုးတာပေါ့နော်။ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ရင်ခုန်တာလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ ဒါက သတိထားရမယ့် အချက်။
အပေါ်က လိုမျိုး မဖြစ်ဖို့ ၂ ယောက်လုံး သတိထားရမှာ မို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခံစားချက် အသစ်လေးတွေ ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုရင် suprise လေ.. အံ့သြဝမ်းသာမှု ဖြစ်မယ့် ကိစ္စလေးတွေ လက်ဆောင်လေးတွေ.. ပန်းကလေးတွေ.. အနမ်းလေးတွေ အစုံပေါ့း)
သူ suprise တစ်ခုခုပေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က အရမ်းကျေနပ်ဝမ်းသာ တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါစေနော် ဒါလေး အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့ အရာဖြစ်ရင်တောင် တမျိုးလေးနော် စိတ်ဝင်စားစရာလေး လို့ ပြောဖို့ မမေ့နဲ့။ ကိုယ်မနှစ်သက်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ရင်တောင် နဲနဲ ဖြစ်ဖြစ် စားပေးလိုက်ပါ။ ကြုံတဲ့အခါတိုင်းလဲ ကိုယ်မကြိုက်ပေမယ့် သူကြိုက်ရင် ဒါစားလေလို့ ပြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ချစ်သူရောလို့ မေးရင် ... မင်းစားတာလေး ထိုင်ကြည့်နေမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ.. အဲ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ ဗိုက်ကြိုဖြည့်ထားနော်. ။ ဥပမာ ယောက်ျားကို ထမင်းစားဖို့ အမြဲစောင့်တက်တဲ့ မိန်းမလိုမျိုးပေါ့..အစာပြေတော့ စားထားရမှာပေါ့ မဟုတ်ရင် အစာအိမ်ရောဂါအ ရရင်ရ မရရင် ဒီလို စောင့်ရတာကို ငြီးငွေ့သွားလိမ့်မယ်။
သူက အမှားတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ရင်... အကယ်၍ အဲ့ဒီအမှားက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ အမှား ဖြစ်ပါစေ ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ အမှားကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ အစဖော်ထားမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်နဲ့။
ယုံကြည်တာ ကောင်းတယ်.. စူးစမ်းတာတော့ အကောင်းဆုံး
သူ့ကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးပေးပါ။ အဲ အဲ့ဒီအနောက်မှာ တော့ စူးစမ်းလေ့လာ မှု ရှိပါစေ ကွယ်။ သူ့ခြေလှမ်းကို သိနေတာက သူ့ကို အပြစ်တင်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်ပါစေ နော်။
ကဲ အစစ အရာရာ စဉ်းစား ပြင်ဆင် ပြီးရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီပေါ့။ လက်ထပ်ခါနီး တစ်ခါ ပြန်စဉ်းစားရမှာ သေချာပြီလား ဆိုတာ..
သူက ကိုယ်နဲ့ ဘဝ တစ်ခု လုံးလက်တွဲဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သေချာလား ..????????
မနက်ဖြန် လက်ထပ်မယ် ဆိုရင် ဒီနေ့အထိ မောင်လေးတို့ ညီမလေး တို့ အချိန်ရနေပါသေးတယ်။
ဘယ်လို အခြေအနေပဲ ရှိရှိ သူများအတွက် လက်ထပ် ရတယ်ဆိုတာ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် ကိုယ်ပဲ စဉ်းစား ။
အဆင်မပြေ နိုင်ဘူး ဆိုရင် တစ်ဘဝ လုံး အဆင်မပြေမှု တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမယ့် အစား နောက်ကို ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါ။
လူသိရှင်ကြားဖြစ်နေလို့ အခြေအနေတွေ လွန်ကုန်လို့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘဝနစ်မွန်းခံပြီး စိတ်ဆင်းရဲ ခံတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့။
မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့.............နောက်ဆုတ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
တစ်ခါလောက် အရှက်ကွဲ ခံတာ တစ်သက်လုံး ငရဲ ခံရမှာ ထက် အများကြီး တော်ပါသေးတယ် ။
ဒီလောက်ဆို ညီမလေး နဲ့ မောင်လေး စဉ်းစားစရာလေး တွေ ရသွားလောက်ပြီနော်။
မမတို့ သူငယ်ချင်းတို့ ရောပဲပေါ့။
ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဘဝလေး တွေ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 11:48 AM
အိမ်မက်ရဲ့ အချစ်အကြောင်းရေးထားတာကို အားပေးသွားပါတယ်နော်. ရေးထားတာတွေ ကောင်းတယ်.. :)
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်။ သူ့အချစ်တွေ လျော့မသွားအောင် ကိုယ့်အချစ်တွေလျှော့ပေးရမယ်။ hee hee :P
တကယ်ကောင်းပြီး လူငယ်တွေအတွက် ဗဟုသုတ ဖတ်သင့်တဲ့
ခြစ်လည်ခြာရိုက်တာ ဂျစ်တစ်တစ်တစ်ကောင်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်း)း)